सरकारी चरम उदासीनताका कारण सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचकाे वार्ता असफल
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचकाे वार्ता असफल भएकाे छ । वार्तामा सरकार गम्भीर नभएको डा. केसी पक्षले अाराेप लगाएकाे छ । बुधबार दुईपटकसम्म भएको वार्तामा सरकारी टोलीले केसीको मागमा सहमत हुनुको सट्टा केसीको मागका बारेमा छलफल गर्न भन्दै समय माग गरे पनि निर्धारित एक घन्टामा उनीहरू वार्तास्थलमा नआएपछि साे वार्ता उपलब्धिबिनै टु‌गियाे ।
सरकारपक्ष नआएपछि केसी पक्षले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, ‘डा‍. गोविन्द केसी १५ औं सत्याग्रहको २६औँ दिनमा रहनुभएको यहाँहरुलाई विदितै छ । यसबीच सरकार तथा डा. केसी दुवैका तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएर विभिन्न चरणमा वार्ता समेत भइसकेको छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशबमोजिमको चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने डा. केसीको मागको सन्दर्भमा यस अगाडि सरकारले तोडमोड गरेर संसदमा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने डा. केसीको अडान रहेको थियो । तर, वार्ताको क्रममा हदैसम्म लचकता अपनाउँदै डा. केसीका तर्फबाट विधेयक फिर्तीको माग थाँती राख्दै विधेयकका प्रावधानहरूमा सुधार गरी सहमति जुटाउनका लागि सरकार पक्षसँग विभिन्न चरणका अनौपचारिक र औपचारिक छलफलमा सहभागी भएका थियौं ।’
तर, आज २६औँ दिनमा डा. केसीको स्वास्थ्य असाध्यै नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष चरम गैर जिम्मेवार र संवेदनविहीन हुँदै विधेयक सम्बन्धी दफागत छलफलमा सार्थक रुपमा प्रवेश नगरेको हुनाले यही अलमलका कारण डा. केसीको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था आइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यो अवस्थामा थप अलमल गरेर डा. केसीको स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पार्न हामी तयार छैनौं । त्यसैले यस्तो संवेदनशील समयमा आएर छलकपटपूर्वक सत्याग्रही डा. केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा हलो अड्काउने सरकारको रवैयाको कडा विरोध गर्दर्छौं । साथै, हामीले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सूचीबमोजिमको सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता आएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने जानकारी गराउँछौँ ।’